I-DemoChimp: Shintsha amaDemo Akho | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 15, 2013 NgoMsombuluko, Okthoba 14, 2013 Douglas Karr
I-DemoChimp okwamanje iku-beta evaliwe kepha ifuna izinhlangano ezinentshisekelo yokusebenzisa insizakalo yazo. I-DemoChimp yenza ngezifiso amademo womkhiqizo, ikhuphula izinga lokuguqulwa kwewebhusayithi yakho kanye nesilinganiso sakho sokuvala-demo ngesikhathi senqubo yokuthengisa, konke ngenkathi kuqoqwa umkhiqizo analytics. I-DemoChimp ilungiselela ngokuzenzakalela idemo ekuphenduleni izidingo ezihlukile zethemba ngalinye, njengomthengisi oyingcweti.
Izici zeDemoChimp nezinzuzo:
Guqula Izivakashi Eziningi Ukuhola - Abavakashi bewebhusayithi yakho bazobhalisa kaningi njengoba bexhumana nokuqukethwe okwenzelwe wena. Lapho ukuhola kwakho kungena, ungabona ukuthi iziphi izingxenye zomkhiqizo wakho ezazibalulekile kubo nokuthi iziphi izingxenye ezazingeyona ukuze ukwazi ukuhlela ukulandela kwakho.
Injini yeDemo ehlakaniphile - Wake wasizwa yini isicelo esithi, "Ungangithumelela idemo?" Manje usungakwazi, futhi i-DemoChimp iguqule ngokuzenzakalela idemo njengoba iphendula izintshisekelo zalokho okulindelwe, ikwenze kube ngokwakho njengomthengisi obukhoma. Futhi ungabona ukuthi babelane nobani ngedemo enhlanganweni yabo ukuze ukwazi ukuthola nokubandakanya lonke iphaneli lokuthenga.
Finyelela i-Demo Analytics (i-Demolytics ™) - Ngemuva kwezigcawu, i-DemoChimp iqoqa idatha ebalulekile ngokuya ngezimpendulo nezenzo zethemba ngesikhathi sedemo. Lokhu sikubiza nge-Demolytics ™. Finyelela kulokhu analytics ngokusebenzisa ideshibhodi noma ukubhoboza uye endaweni ethile.
Tags: uhlelo lokusebenza lwedemoipulatifomu yedemodemochimpama-demosipulatifomu yokubonisa yomkhiqizoamademo womkhiqizoidemo yokuthengisaukubonakaliswa kokuthengisa
I-MarketingPilot: Ukuphathwa Kokumaketha Okuhlanganisiwe KweMicrosoft Dynamics CRM
I-Oct 15, i-2013 ku-8: i-24 PM
Siyabonga ngalokhu. Ngingoweqembu lokuqalisa futhi ukubambisana nomhlinzeki wokuqalisa wobuchwepheshe ongahle kube lusizo ngazo zombili izindlela.